Planner: Task, oru ngo na ihe mgbaru ọsọ nsuso ngwa Site na Linux
Planner: Ngwa maka nsuso ihe aga-eme, oru ngo na ebumnuche
Taa, anyị ga-enyocha otu ngwa ọzọ n'ọhịa nke njirimara onye ọrụ, nke ahụ bụ, ndị na-adịkarị dị mfe, kwụ ọtọ ruo n'ókè, ma ọ bụ nke ahụ na-agbakwụnye uru dị ukwuu maka ịrụ ọrụ kwa ụbọchị, na-ezere ihe ndọpụ uche na ịbawanye ụba arụpụta ihe.
Ngwa a nwere aha ndị a: «Onye nhazi ».
Maka ndị na-ahụbeghị nke anyị gara aga metụtara post eji ngwa arụpụta ihe akpọrọ "Super arụpụtaghị" o "Superproductivity", anyị na-ahapụ njikọ n'okpuru ka ị gụchaa akwụkwọ a ị nwere ike ịchọpụta ya:
"Superproductivity bụ uNdepụta ọrụ nkeonwe, stampụ oge na ngwa njikwa njikwa, dị mma maka ndị mmemme na ndị ọrụ dijitalụ ndị ọzọ, nke nwekwara njikọta na nyiwe Jira, Github na Gitlab. Tụkwasị na nke a, ọ bụ ikpo okwu (Linux, MacOS na Windows) na ebumnuche ya bụ iji belata oge ndị ọrụ na-eji eme ihe ugboro ugboro na iji nye ebe iji kpokọta ozi niile achọrọ iji rụọ ọrụ ma ọ bụ ọrụ. ." Super arụpụta: A Iji Mee List & Oge Ndepụta App
1.1 Gịnị bụ onye nhazi?
1.2 Ozi ugbu a
1.2.3 Ihuenyo gbaa
Gịnị bụ onye nhazi?
Dị ka gị ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, ọ kọwara nke ọma dị ka ndị a:
" Ọ bụ ngwa nke Nchịkwa Ọrụ na nkwado maka Ndepụta ọrụ ma ahaziri ya nke ọma GNU / Linux."
Mgbe, nke ha njirimara na uru ndị na-esonụ kwụpụta:
Ọ bụ ngwa nrụpụta nke na-enyere aka imezu ebumnuche nke ndị ọrụ ya, site na ime ka nyochaa ọrụ niile, ọrụ na ebumnuche n'otu ebe ma dị mfe.
Ọ na-enye ohere ịrụ ọrụ na mpaghara, yana n'ịntanetị, site na ịmekọrịta ya na akaụntụ na Todoist Platform (https://todoist.com/es).
Ọ na-eme ka atụmatụ nke oru ngo, site na ikwe ka ọrụ (ọtụtụ ma ọ bụ ole na ole) nke bụ akụkụ ya nwere ike kewaa na ngalaba, enwere ike ịrụ ya ma jikwaa ya.
Ọ nwere ihu igwe mara mma ma mara mma nke na-akwado ịgbakwunye ndetu, na-egosipụta URLs, na-ekepụta oge ma na-agbakwunye mkpado.
Ngwa kalịnda gị nwere ike ịmekọrịta na onye nhazi ọrụ iji jikwaa mmemme gị niile na iji ọnụ ọnụ n'otu ebe.
O nwere otutu asusu, ma asusu Spanish.
Ozi ugbu a
Nke ikpeazu ya nke ugbu abụ nọmba 2.6.9 wepụtara naanị ụbọchị ole na ole gara aga. Thatdị nke dị n'etiti ọtụtụ atụmatụ na mgbanwe ọhụrụ, gụnyere ihe ngosi ọhụụ ọhụụ iji mara ma ọrụ ọ nwere subproject, mmelite UX iji daa ma ọ bụ gbasaa subprojects, tebụl ọrụ agbakwunyere na Ngalaba na Tebụl, gbakwunye ntụgharị asụsụ emelitere. Maka ozi ndị ọzọ na nke a ị nwere ike ịga leta ma ọ bụrụ gọọmentị webụsaịtị na GitHub.
Ebe ọ bụ na ngwa dị ka arụnyere ozugbo na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nke Distro elementrị, na ndị ọzọ site na ".Flatpak usoro", anyị ejirila usoro ikpeazụ a, dị ka egosipụtara na ndị na-esonụ njikọ, nke ahụ bụ, iji iwu na-esonụ:
Mgbe arụnyere, anyị nwere ike ịgba ọsọ ya site na ịpị ya Ihe ngosi menu ma ọ bụ site na iwu iwu:
Ozi ndị ọzọ banyere «Onye nhazi » nwere ike nweta na ndị na-esonụ njikọ.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Planner», nke bu ihe bara uru na nke bara uru nke Nchịkwa Ọrụ na nkwado maka Ndepụta ọrụ nakwa na e mere ya kpọmkwem maka GNU / Linux; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Planner: Ngwa maka nsuso ihe aga-eme, oru ngo na ebumnuche
W3C nyere ọkwa WebRTC
Firefox 85 bịarutere na-asị Flash na yana mmelite dị iche iche